I-Semalt Ihlinzeka Amasu Okudweba Okuqukethwe Okuzenzakalelayo Ukunciphisa Umsebenzi Wakho
Ukuhlungwa kokuqukethwe kuwumkhuba wokukhipha ulwazi oluwusizo kusuka kwi-intanethi bese uyishicilela iwebhusayithi. Abaphathi bewebhu nabalobi abahlukahlukene bathatha ama-athikili kusuka kubhulogi namasayithi ukuze bakhule amabhizinisi abo. Amabhizinisi, abahleli, nabathuthukisi bewebhu basebenzisa ama-web scrap ama-web scrap noma amathuluzi wokumba amaminithi wokuqukethwe ukuze benze imisebenzi yabo yenziwe. Izindlela ezivelele kakhulu zokulahla okuqukethwe zibalulwe ngezansi.
1: Ukukhishwa kwe-DOM
I-DOM noma i-Document Object Model ichaza isitayela nesakhiwo sokuqukethwe ngaphakathi kwamafayela we-HTML ne-XML - puder vichy aera teint make-up. Ama-DOM ahambayo asetshenziswa abahleli nabathuthukisi ukuthola imibono ejulile yamakhasi ewebhu ahlukene. Ungasebenzisa i-DOM parser ukususa okuqukethwe kwewebhu kalula. I-XPath iyithuluzi eliphelele lokukhipha amawebhusayithi afisa ama-blogs futhi iyahambisana ne-Mozilla, i-Internet Explorer ne-Google Chrome. Nge-XPath, ungakwazi ukukhipha okuqukethwe kwendawo yonke noma ingxenye ngaphandle kwesidingo samakhono wokuhlela.
2: i-HTML yokumangalela
3: Ama-Aggregation amaqiniso
. Bahlose amathebula ahlukene nezinhlu futhi bavune okuqukethwe okunenjongo ngokuvumelana nezidingo zabo. Abanye babo bathembela ku-Kimono Labs namanye amathuluzi afanayo ukuze umsebenzi wabo ufezeke. Le nqubo izokulethela izinzuzo kuphela uma usebenzisa izinombolo ze-crawlers kanye ne-bots, kanye nekhwalithi yezinyathelo zokuqukethwe ukusebenza kahle kwalezi bots kanye nabakwa-crawlers.
4: Ama-Google Amadokhumenti
ama-spreadsheet e-Google asetshenziswa njengenkonzo enamandla yokulahla okuqukethwe. Le nqubo idume phakathi kwama-scrapers. Kusuka ku-Google Amadokhumenti, ungangenisa amafayili afisekile futhi uwafake njengezidingo zakho. Ngaphandle kwalokho, ungakwazi ukuhlola njalo nokuqapha ikhwalithi yezinto eziqukethwe ngenkathi ishaywa.
i-XPath noma i-XML Path Language ulimi lombuzo osebenza kuma-HTML ne-XML amadokhumenti. Njengoba lezi zincwadi zisekelwe kwisakhiwo somuthi, i-XPath ingasetshenziswa ukuhamba ngamakhasi ewebhu akhethiwe futhi kusiza ukuhlola ikhwalithi yokuqukethwe. Inikeza izinzuzo eziningi kubaphathi bewebhu ekuhlanganiseni nge-HTML ne-DOM ukuxoshwa, futhi okuqukethwe kungashicilelwa kuwebhusayithi yakho ngokushesha.
6: Ukufanisa umbhalo wephethini
Kuyindlela yokufanisa okusetshenziselwa abathuthukisi kanye nabahleli futhi abanjwe ngezilimi ezifana neRuby, Python, nePerl. Ungasebenzisa le ndlela yokulahla okuqukethwe ukuze ukhiphe inombolo enkulu yamasayithi ngokugcwele noma ngenxenye.
Wonke lawa maqhinga wokulahla okuqukethwe aqinisekisa imiphumela yekhwalithi, futhi kukhona namathuluzi afana ne-cURL, HTTrack, Node. i-js ne-Wget ezakhiwe ukwenza lula umsebenzi wakho. Ungakwazi ukukhipha izingosi eziningi noma ezincane njengoba ufuna.